Vehivavy Mifindra Monina Misedra Sy Miezaka Mitraka Amin’ny Herisetra Ara-nofo Mandritry Ny Fandehanana Mankany Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2016 13:55 GMT
Mpifindra monina Amerikana Afovoany mitady fialokalofana any atsimon'i Meksika. Sary an'ny mpampiasa Flickr, Peter Haden (CC BY 2.0).
Mba ahatongavana any Etazonia, maro ireo vehivavy mifindra monina avy any Amerika Afovoany no manavatsava an'i Meksika, izay tonga hatramin'ny taha ambony mampiahiahy tokoa ny famonoana vehivavy sy fanjavonam-behivavy. Maro ireo olona sy ivontoerana tomponandraikitra amin'ny herisetra atao amin'ireo vehivavy sy ireo mpifindra monina: tomponandraiki-panjakana, mpampiampita an-tsokosoko, ary mpanao varomaizina rongony, hatramin'ireo mpisehatra ara-tantara amin'ny politika sy sosialy ary toekarena, toy ny tsy fitoviana, kolikoly, politika miady amin'ny fifindrà-monina, fahantrana, ary ny fampitomboana ny fametrahana miaramila eny amin'ny sisintany.
Araka ireo fanadihadiana sasantsasany, 80% n'ireo vehivavy sy ankizivavy avy any Amerika Afovoany izay manandrana manavatsava an'i Meksika no voaolana.
Misy olna momba ny fanjavonam-behivavy any Meksika. Nandritra ny taona maro, nanototra ireo tanàna toa an'i Juarez sy ny Tànanan'i Meksika ny herisetra atao amin'ireo vehivavy Meksikana, tanàna izay ahitàna ireo vehivavy tsy hita nisy namono na tsy ahenoana vaovao intsony. Ao amin'ny renivohitra Meksikana fotsiny izao, tatitra miisa 187 mahakasika vehivavy tsy hita no nisy nametraka tao anatin'ny telo volana tamin'ny voalohandohan'ity taona ity. Maro ireo vehivavy hita ho iharan'ny “féminicide” — teny entina milaza ny herisetra atao amin'ny vehivavy, izay mamaritra ny famonoana ireo vehivavy satria izy ireo vehivavy.
Eo amin'ny sehatra nasionaly, nitombo 55 isan-jato ny famonoana vehivavy tany Meksika tao anelanelan'ny taona 1990 sy ny taona 2011. Araka ny tatitra iray nataon'ireo sampana Vehivavin'ny Firenena Mikambana, ny taona 2012 , nitombo hatrany tao amin'ny firenena ny tranganà famonoana vehivavy, nanomboka ny taona 2007. Vao haingana izao, hitan’ny “National Citizen Femicide Observatory” (OCNF), fitambaran-kery izay manangona antontan-kevitra momba ilay heloka bevava, fa ny taona 2012 sy 2013, 24 isan-jaton'ireo tranga fotsiny no nohadihadian'ireo manampahefana ary 1,6 isan-jato tamin'izany no tonga hatrany amin'ny fanasaziana.
Mandritra izany, mbola tsy aseho loatra hatrany amin'ny sàrany mahatsiravina ny herisetra atao amin'ireo vehivavy mpifindra monina izay miampita ny sisintany atsimon'i Meksika mba hankany amin'ny avaratr'i Etazonia. Ny ‘ ‘Niharan-doza Manjavona: Mpifindra Monina Miampita an'i Meksika” (2010) navoakan'ny Amnesty International dia nitatitra fa matetika hatrizay dia fomba fandoavana ny sàran'ny fiampitàna ny sisintanin'ireo firenena roa, mankany avaratra, ny herisetra ara-nofo:
Maro ireo jiolahy manao heloka bevava no hita ho mampiasa ny herisetra ara-nofo ho ampahan'ny “sàrany” takiana amin'ireo mpifindra monina. Araka ireo manampahaizana sasany, betsaka tokoa ny mety hisian'ny fanolanana, hany ka mety hitaky amin'ireo vehivavy mba hitsindrona fanabeazana aizana ireo mpampiampita an-tsokosoko mialoha ny fandehanana, mba ho fisorohana.
Miezaka mitraka amin'ny herisetra ireo vehivavy
Niparitaka nanenika ireo vehivavy tao amin'ireo fireneny sy ireo fiarahamoniny avy, ireo tantaran'ny herisetra ara-nofo, ka ny sasany tonga dia mandray fepetra mba hiomanana amin'izay zava-mitranga mandritra ny dia mankany avaratra. Maro ireo mampiasa ny fomba fanabeazana aizana Depo-Provera, fantatra ihany koa amin'ny hoe tsindrona “miady amin'i Meksika”, mba hisorohana ny vohoka. Mandeha manao andiany ihany koa ireo vehivavy mpifindra monina, mba hahatsapàny ho voaaro.
Ary mandritra ny dia fifindràmonina, mahazo fanampiana avy amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo manampy ireo mpifindra monina sy ireo vehivavy mpiara-dia aminy ireo vehivavy mpifindra monina avy any Amerika Afovoany.
Ao amin'ity lahatsary manaraka ity, izay ho an'ny Ivontoerana Iraisampirenena ho an'ny Zon'olombelon'ireo mpifindra monina (CIDEHUM ny mitovy aminy amin'ny teny Espaniola), ho ampahan'ny hetsiny “Vehivavy Mpifindra Monina Manova ny Tany,” mizara harona misy sakafo sy atin'akanjo ho an'ireo vehivavy mandeha lavitra any ambony fiarandalamby mpitatitra sakafo, izay manavatsava ny kaominin'i Huechuetoca, i Lourdes Martínez Gómez, tovovavy mipetraka ao amin'ny Fanjakan'i Meksiko.
Ao amin'ilay lahatsary, milaza izao i Lourdes:
Lasibatra mora kendrena ireo vehivavy. Mety tsy dia manana fiarovana noho ireo lehilahy izy ireo, ary indrindra raha vehivavy mpifindra monina.
ZZZRaha nahita fomba hiarovana tena ireo vehivavy mpifindra monina ary nahazo fanohanana avy tamin'ireo mpikatroka mafana fo, mbola sarotra kosa ny fahazoana ny rariny ho an'ireo iharan'ny herisetra ara-nofo. Nametraka politika hentitra amin'ny fitazonana sy famerenana ireo mpifindra monina any amin'ny tany niaviany i Meksika, ary loza lehibe mananontanona ny fandehanana any amin'ireo manampahefana mba hitatitra ireo heloka bevava.
Vokatry ny fangatahan'i Etazonia lazaina ho an'ny fiarovana ny faritra no nametrahana miaramila eny amin'ny sisintany atsimon'i Meksika, fifanarahana ara-barotra mitovy amin'ny Fifanarahana Ara-barotra Malalaka ifanaovan'ny Amerikana Tavaratra (NAFTA), ary ilay Fifanambaran-kery ho an'ny Firoboroboana natao vao haingana. Nahatonga fampiasàna fitaovana, fanofanana ireo hery fiarovana ary fitaovana ao amin'ny Drafitra Sisintany Atsimo, ilay famoretana atao amin'ny fifindramonin'ireo avy any Amerika Afovoany. Voatery miaritra herisetra mafy ireo vehivavy mpifindra monina noho ny fisian'ireo miaramila, miampita ireo toerana tena ahitan-doza be tokoa mba hitsoahana amin'ny fitazonana. Efa nanampy ny miaramila ihany koa ny any amin'ny sisintany avaratr'i Meksika.
Ara-tantara, nitsoaka ny herisetra tany amin'ireo firenena nonenany ireo Amerikana Tanivo, ary vao haingana, miatrika fitomboana herisetra atao amin'ny vehivavy any an-trano ireo vehivavy. Araka ny tantara fohy avy amin'ny NACLA, milahatra ao amin'ireo folo voalohany amin'ireo firenena be famonoana vehivavy noho ny mahavehivavy azy ireo, ao anatin'ny tondro manerantany, ny telozoro avaratr'i Amerika Afovoany (izay ahitana an'i El Salvador, Guatemala, ary Honduras). Maneho ohatra amin'ny zava-misy mampitahotra momba ny herisetra ato amin'ireo vehivavy ary ireo vehivavy mpikatroka mafana fo any Amerika Afovoany, ny famonoana vao haingana an'ilay mpikatroka mafana fo mpiaro ny tontolo iainana avy any Honduras sy nahazo ny Loka “Goldman” ho an'ny Tontolo Iainana, Berta Cáceres.
Manao tosika ho an'ny fanovàna ny politika mba hiarovana ireo vehivavy mpifindra monina ireo fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena. Takian’ireo manampahaizana ny hamoahana taratasy maha-mpizahatany sy maha-olona ho an'ireo vehivavy mpifindra monina any Meksika, mba hanalefahana ny herisetra noho ny politika fametrahana miaramila marobe amin'ny sisintany sy ireo mpanao varomaizina rongony eo an-toerana.
Sahiran-tsaina amin'ny fitomboan'ny isan'ireo vehivavy mihazakazaka any Amerika Afovoany izahay
Taminà tafatafa ho an'ireo mpanao gazety, tamin'ny fiandohan'ity taona ity, niantso ny hametrahana dingana fiarovana sy fepetra ao amin'ny faritra ny Masoivohon'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpifindramonina, mba hifampizaràna ny andraikitra amin'ny olan'ireo mpifindramonina.
“Mahita ny toe-javatra miseho any Amerika Afovoany ho olana ara-piarovana ny UNHCR. Izahay dia miahiahy manokana momba ny fitombon'ny isan'ireo ankizy tsy misy mpanaraka sy vehivavy mihazakazaka miampita, izay miatrika fanerena hiditra ao anatinà andian-jiolahy mpanao heloka bevava, herisetra ara-nofo sy noho ny maha-vehivavy azy ary famonoana,” hoy ny mpitondra tenin'ny UNHCR, Adrian Edwards.